ထွက်ပြေးတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေအကြောင်း – Thadin Media
September 18, 2017 September 18, 2017 adminLocal News, Political
စာရင်းအရ ဘင်္ဂလားကိုပြေးတဲ့အထဲ ကလေး ၂၆၀၀၀၀ တဲ့။ပေါက်လွှတ်ပဲစားကို မွေးထားကြတာ။
ကျနော်အမှုစစ်တော့ တရားခံအများစုက ဆင်းရဲတာ တာတေလံနေကြတာပဲ။ များသောအားဖြင့် သူတောင်းစားတွေနဲ့ ကူလီကျဘမ်းတွေပါ။
အဆင်ပြေဆုံး လယ်ပိုင်ယာပိုင် တစ်ယောက်ကို ကျနော်စစ်မေးတဲ့ အပိုင်းအစလေးကြည့်ပါ။
အလုပ်အကိုင်ပြော လယ်သမားပါ။ လယ်ဘယ်နှစ်ဧကပိုင်သလဲ တစ်ဧကပါ။ သားသမီးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ ၁၀ယောက်ပါ။
ဟင် ဒါဆိုမင်းကိုမှီခိုစားတဲ့ မိသားစုဝင် စုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲ ၁၅ ယောက်ပါ။ ဘယ်လိုများ စားလဲကွာ ဟုတ်ကဲ့ INGOs တွေရှိပါတယ်။
သူတောင်းစားရော လယ်ကူလီရော အသက်ခပ်ငယ်ငယ်ကလွဲရင် ၈ ယောက် ၁၀ ယောက် အောက်မလျော့ဘူး။
အဲ့ဒါက ကျနော် ထွင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ့်ကို လူသားဖောက်လုပ်ငန်းကို စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နေကြတာပါ။ စက်များရှိရင် စက်နဲ့များ ဖောက်ကြမလားပဲ။
ဒါကိုစနစ်ကျအောင် ပြုပြင်ရအောင် ပညာပေးမယ့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း လဝက ထွေအုပ် ကျေးလက် စသဖြင့် ဝန်ထမ်းတွေကျ ရွာထဲကိုပေးမဝင်ပါဘူး။ ဓားဆွဲ တုတ်ဆွဲ သတ်မယ်ဖြတ်မယ် ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မဝင်ရဲကြဘူး။ အချုပ်အခြာပျက်နေတာ ကြာပါပြီ။
ကျနော်တို့မှာလည်း လူ့အခွင့်အရေးက တမျိုး OIC တို့ INGOs. NGOs တို့ ကတစ်မှောင့်နဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားမကိုင်တွယ်ရဲဘူး။ မပစ်ရဲမှန်းသိတော့ ကုလားတွေက သေနတ်ရှေ့ လာ က ပြကြတယ်။ ဒီကနေ အတင့်ရဲလာတာပေါ့ဗျာ။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ရမယ်။ ချော့တာကြိုက်တဲ့လူချော့ ချောက်တာကြိုက်တဲ့ချောက်။ ရိုက်တာမှကြိုက်တဲ့သူဆိုလည်း . . . . ပေါ့ဗျာ။ အိမ်တစ်အိမ်ဦးစီးရသလို ဦးစီးကြရမှာပဲ။
အာမခံတာကတော့ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးက သနားတတ်ပါတယ်။ ကောင်းကောင်း မွန်မွန် နေတဲ့သူ သွားမလုပ်ပါဘူး။ လိမ်လိမ်မာမာနေ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။
အဲ့ဒီကနေ ဒီ ဆယ်ဆတိုးစနစ်နဲ့ ပေါက်ပွားနေတဲ့ ကုလားထုကြီးကို ထိန်းချုပ်ရမယ်။ မထိန်းချုပ်နိုင်ရင် မကြာဘူး ဒါမျိုးထက်ဆိုးတာ ထပ်လုပ်နေကြဦးမှာပဲ။ terrorism virus က ကိုက်နေပြီ။ စဉ်းစား ထားကြဖို့ပါ။
စာရငျးအရ ဘင်ျဂလားကိုပွေးတဲ့အထဲ ကလေး ၂၆၀၀၀၀ တဲ့။ပေါကျလှတျပဲစားကို မှေးထားကွတာ။
ကနြျောအမှုစဈတော့ တရားခံအမြားစုက ဆငျးရဲတာ တာတလေံနကွေတာပဲ။ မြားသောအားဖွငျ့ သူတောငျးစားတှနေဲ့ ကူလီကဘြမျးတှပေါ။
အဆငျပွဆေုံး လယျပိုငျယာပိုငျ တဈယောကျကို ကနြျောစဈမေးတဲ့ အပိုငျးအစလေးကွညျ့ပါ။
အလုပျအကိုငျပွော လယျသမားပါ။ လယျဘယျနှဈဧကပိုငျသလဲ တဈဧကပါ။ သားသမီးဘယျနှဈယောကျရှိလဲ ၁၀ယောကျပါ။ ဟငျ ဒါဆိုမငျးကိုမှီခိုစားတဲ့ မိသားစုဝငျ စုစုပေါငျးဘယျလောကျလဲ ၁၅ ယောကျပါ။ ဘယျလိုမြား စားလဲကှာ ဟုတျကဲ့ INGOs တှရှေိပါတယျ။
သူတောငျးစားရော လယျကူလီရော အသကျခပျငယျငယျကလှဲရငျ ၈ ယောကျ ၁၀ ယောကျ အောကျမလြော့ဘူး။
အဲ့ဒါက ကနြျော ထှငျပွောနတောမဟုတျဘူး။ တကယျ့ကို လူသားဖောကျလုပျငနျးကို စနဈတကြ လုပျကိုငျဆောငျရှကျ နကွေတာပါ။ စကျမြားရှိရငျ စကျနဲ့မြား ဖောကျကွမလားပဲ။
ဒါကိုစနဈကအြောငျ ပွုပွငျရအောငျ ပညာပေးမယျ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး လဝက ထှအေုပျ ကြေးလကျ စသဖွငျ့ ဝနျထမျးတှကြေ ရှာထဲကိုပေးမဝငျပါဘူး။ ဓားဆှဲ တုတျဆှဲ သတျမယျဖွတျမယျ ဆိုတော့ ဘယျသူမှ မဝငျရဲကွဘူး။ အခြုပျအခွာပကျြနတော ကွာပါပွီ။
ကနြျောတို့မှာလညျး လူ့အခှငျ့အရေးက တမြိုး OIC တို့ INGOs. NGOs တို့ ကတဈမှောငျ့နဲ့ ပွတျပွတျသားသားမကိုငျတှယျရဲဘူး။ မပဈရဲမှနျးသိတော့ ကုလားတှကေ သနေတျရှေ့ လာ က ပွကွတယျ။ ဒီကနေ အတငျ့ရဲလာတာပေါ့ဗြာ။
ဒီတဈခေါကျတော့ အုပျခြုပျရေး နဲ့ အခြုပျအခွာ အာဏာကို ခိုငျမွဲအောငျလုပျရမယျ။ ခြော့တာကွိုကျတဲ့လူခြော့ ခြောကျတာကွိုကျတဲ့ခြောကျ။ ရိုကျတာမှကွိုကျတဲ့သူဆိုလညျး . . . . ပေါ့ဗြာ။ အိမျတဈအိမျဦးစီးရသလို ဦးစီးကွရမှာပဲ။
အာမခံတာကတော့ ကြှနျတျောတို့လူမြိုးက သနားတတျပါတယျ။ ကောငျးကောငျး မှနျမှနျ နတေဲ့သူ သှားမလုပျပါဘူး။ လိမျလိမျမာမာနေ ဘာမှ မဖွဈဘူး။
အဲ့ဒီကနေ ဒီ ဆယျဆတိုးစနဈနဲ့ ပေါကျပှားနတေဲ့ ကုလားထုကွီးကို ထိနျးခြုပျရမယျ။ မထိနျးခြုပျနိုငျရငျ မကွာဘူး ဒါမြိုးထကျဆိုးတာ ထပျလုပျနကွေဦးမှာပဲ။ terrorism virus က ကိုကျနပွေီ။ စဉျးစား ထားကွဖို့ပါ။